यसकारण खल्लो हुँदैछ, दम्पतीको यौन जीवन ? - Naya Pusta
यसकारण खल्लो हुँदैछ, दम्पतीको यौन जीवन ?
एजेन्सी । यौन सम्बन्धको चर्चा गर्दा हामी लाजले खुम्चन्छौं । यौनलाई छाडा वा लाजमर्दो कुराको रुपमा हामीले बुझेका छौं । जबकी यो जीवन पद्धतीकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यो प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिया हो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यसकारण भरिन्छ पेटमा ग्यास, यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
यो पनि पढ्नुहोस् : बिहान उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र
ओठको आकारबाट जान्नुहोस आफ्नो भाग्य
सावधान : यौन संबन्धमा यस्ता आसनले हुन्छ अधिक लिंग फ्र्याक्चर